Kuya kuthatha ixesha elingakanani kwinkqubo yakho yokulungisa ifayile yam? - DataNumen
Kuxhomekeka kwezi zinto zilandelayo:
Ubungakanani befayile yakho. Ukuba ifayile yakho inkulu, kuya kuthatha ixesha elide ukuhlalutya kuba inkqubo yethu iya kujonga kwaye ihlalutye yonke i-byte kwifayile yakho, echitha ixesha. Umzekelo, i-100GB ye-PST ihlala ithatha malunga neeyure ezili-10 + ukuyilungisa.
Ubunzima befayile yakho. Ukuba zininzi idatha kwaye zingqamene zibhekisa kwezinye kwifayile yakho, ngokuqhelekileyo kuya kuthatha ixesha elininzi ukuyilungisa. Umzekelo, a SQL Server Ifayile ye-MDF ineetafile ezininzi, ii-indexes, kunye nezinye izinto zihlala zithatha iiyure ezininzi ukuzilungisa.
Uhlobo lwefayile yakho. Ezinye iifomathi zefayile zinzima ngakumbi, ezifuna ixesha elininzi kunezinye. Umzekelo, i-AutoCAD DWG ifayile kunokuba nzima, ke nkqu 5MB DWG ifayile inokuthatha iiyure ezininzi ukuyilungisa.
ixesha elingakanani, ixesha elisetyenzisiweyo
Ukuhlaziywa ngoMeyi 15, 2021
Ngaba ingxelo epheleleyo iya kuphinda ifumane idatha engaphezulu kunedemo?Ungayiphucula njani imveliso yam?